Kiinee Dhagaxa ugu Horreeya ku Tuuraya - SOMALI BELIEVERS FELLOWSHIP
Ciise Masiix wuxuu ahaa ka keliya ee haweeneydaa xukumi karey, waayo dembi muu lahayn, laakiinse isagu "Uma uu imanin inuu kuwa xaqa ah u yeedho, laakiin inuu dembilayaasha u yeedho" (Markos 2:17). Dhammaanteena dembiileyaal ayaynu nahay, oo ay ku jirto haweeneydan dembiga lagu soo oogey, haddii ay sinaysatay iyo haddii kaleba. Masiixu wuxuu dembiileyaasha ugu yeedhayaa maaha inuu iyaga xukumo, laakiinse waa inuu badbaadiyo (Yooxanaa 3:17).
Maaha inaynu qofna xukuno waayo Ilaahay ayaa ah ka xukunka iska leh. Haddii aynu qof dembi ka qabanayno waa inaynu muhiimadda koowaad siinaa sidii aynu dib ugu dhisi lahayn xidhiidhkii qofkaasi Ilaahay la lahaa. Ciise ayaa ahaa ka keliya ee macbudka joogey ee aan dembiga lahayn, laakiinse halkii uu haweeneyda ka xukumi ama ka eedayn lahaa iyada wuu badbaadiyey oo nolosheedii buu dib u siiyey. Innaguna sidoo kale waa inaynu ka faa'iideysanaa fursad kasta oo aynu dadka ku saamixi karno, oo jacaylka Masiixa ula qaybsan karno, innaga oo mar kasta xasuusanayna inaynu lafteenu ku badbaaday nimcada Ilaahay darteed, "Waayo, idinku waxaad ku badbaadeen nimco xagga rumaysadka. Mana aha wax xaggiina ka yimid, laakiinse waa hadiyadda Ilaah, mana aha xagga suqullada, si aan ninna ugu faanin." (Efesos 2:8,9)